Gabadh Wariye Ah oo Aabaal Marin CNN ka Heshay Markii Ay Soo Ogaatay Arrin Lagu Sameeyo Gabdhaha Soomaliyeed ee Ku Nool Dalka Kenya.+ (Daawo Video) - iftineducation.com
Gabadh Wariye Ah oo Aabaal Marin CNN ka Heshay Markii Ay Soo Ogaatay Arrin Lagu Sameeyo Gabdhaha Soomaliyeed ee Ku Nool Dalka Kenya.+ (Daawo Video)
iftineducation.com – -Faadumo Noor oo ah weriye dhinaca qoraalka ayaa ku guuleystay ilaa iyo labo Aabaal marno, kaddib markii ay soo shaac saartay sheeko naxdin leh oo bulsho badan u iftiimisay khatarta shaqooyinka qaar laga la kulmo.
Faadumo ayaa si ay u hesho gabadhaas, waxa ay tagtay Xaafada ay caanka ku yihiin Soomaalidu ee Islii, halkaas oo ay kula kulantay dad Soomaali ah, waxa ayna su’aashay halka laga heli karo gabdhaha ka yimaada Qaxootiga ee u soo shaqo taga halkan ama nafta soo bida,Waxaa loo sheegay in ay joogaan meel Hoteel ah ayna ka shaqeystaan.
Waxa ay gashay Hoteelkii oo cunno ka dalbatay malintii koobaad, kaddibna way ka tagtay, si ay sheekada u soo hesho waxa ay Hoteelka Baarka ku yaala ku soo laalabanaysay muddo afar cisho ah oo ay markasta cuunno ka dalbanaysay ilaa ay markii dambe heshay fursad ay kula kulanto maamulaha Hotelka.
Halkaan ka Daawo Qeybta 1-aad
Hotelka haddii aan si fiican uga faaloodo sida ay sheegtay Faadumo Dabaqa hoose waa Baar laga cunteeyo labada qeyb ee ka sareysana waxa ay ahayeen meesha ay sheekaduba xooga ku leedahay ee ay u soo galmood tagaan ragga dhaqaalaha isku huba, kuwaas oo laga iibsho jirka hablaha Soomaaliyeed ee dalkoodu burburay, kuwaas oo marka hore loo sheego in la siinayo shaqo ah dhinaca nadiifinta Hoteelka iyo IWM.
Wariye arrintan ka wareysanayay Faadumo ayaa weydiiyay su’aal ahayd madan naftaada u baqin markii aad la kulmaysay maamulaha meesha, waxa ayna ugu jawaabtay in ay ogayd halista meesha ka jiri karta balse ay u bareertay si ay xog dhab ah u soo hesho, islamarkaana ay iska dhigto qof u baahan waxkasto lagu xiro in ay qaban karto.
Faadumo ayaa sheegtay in ay ka mid ahaayeen sababihii dhiiragalayay in ay ka mid ahaayeen sida iyadaoo ay meesha joogeen gabdho da’doodu ay u dhaxeysay 14 jir ilaa 15 jir oo marka iyada loo eego da’deeda oo ah 24 sano jir aad uga yaraa.
Qaabkii ugu fiicnaa ee ay ku heshay Faadumo fursada la kulanka maamulaha Hoteelka ayaa ahayd markii ay iska dhigtay gabadh ka mid ahayd shaqaalaha meesha oo ka
soo laabtay xeryaha qaxootiga, islamarkaana aysan jirin wado kale oo u banaan oo ay ku noolan karto ayna diyaar u tahay in ay marto sharcikasto oo meesha ka jira.
Helvetica, sans-serif;”>Wariyaha ayaa markale su’aal ku celiyay Faadumo, waxa uuna waydiiyay bal in ay jirtay wax tuhun ah oo galay maamulaha markii ay la kulmaysay, sida in ay wariye tahay iyo in xataa ay arrimahaas ku lug leedahay, waxa ayna ugu jawaabtay maya marnaba ma uusan dareemin arrinkaas ana maba rabin in uu dareemo.
Halkaan ka Daawo Qeybta 2-aad
Faadumo ayaa la kulantay maamulihii meesha maalin jimco ah, waxa uuna ku yiri “Halkani waa meel sharuuc badan ee ma ka bixi kartaa.” Faadumo ayaa tiri haa, markaas kaddibna waxa uu la yeeshay waraysi, waxa ayna u sheegtay in hooyadeed ay iyada ku tiirsan tahay dhaqaalo ahaan iyo waalidkeedba ayna diyaar u tahay in ay shaqeysato, markaas kaddib wuxuu ku yiri shaqo gal.
Nimanka meesha yimaada ayaa bixiya lacag u dhaxeysa ilaa 10 kun ama 20 kun oo Kenya lacagteeda ah, balse gabdhaha saas loola dhaqmo waxaa ka soo gaara ilaa iyo 200 oo Shillin oo Kenyan ah.
Labo gabdhood ayaa meesha laga saaray, kaddib markii laga warhelay arrinkan oo ay wax ka qortay wariye Faadumo Noor.
Maraykanka oo Noqonaya dalka ugu Horeeya soo Saarista Bartoolka
Aishwarya Rai oo diyaar garow ugu jirta qaabkii ay ugu soo laabo leheed Bollywoodka.